Matthijs de Ligt Oo Afka Furtay Isaga Oo Soo Bandhigay Shuruudaha Uu Ku Kala Dooranayo Kooxaha Doonaya Iyo Hal Koox Oo Si Khaas Ah Loo Waydiiyay. - Gool24.Net
Matthijs de Ligt Oo Afka Furtay Isaga Oo Soo Bandhigay Shuruudaha Uu Ku Kala Dooranayo Kooxaha Doonaya Iyo Hal Koox Oo Si Khaas Ah Loo Waydiiyay.
Kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa bixiyay waraysi uu ku shaaciyay nooca shuruudaha uu ku kala dooranayo kooxaha tirada badan ee safka dheer ugu jira si ay xagaagan ula saxiixdaan.
Matthijs de Ligt ayaa waraysi uu siiyay wagayska dalka Spain ka soo baxa ee Mundo Deportivo waxa uu ku cadeeyay in ayna lacagtu dhibaato ahayn balse uu doonayo in kooxda uu ku biirayo uu ka helay door hogaamineed isla markaana uu kulamada ugu badan u ciyaari karo.
Waxa uu De Ligt waxa si gaar ah loo waydiiyay haddii uu kooxda Barcelona ku soo biirayo wuxuuna sheegay in aanu wali hubin haddii uu yahay waqtigii ku haboonaa ee uu Barca ku biiri lahaa wuxuuna cadeeyay in uu xaalada qiimayn doono.
Wargayska Mundo Deportivo oo daabacay warayasiga ay De Ligt ka qaadeen ayuu jawaabta kooxda Barcelona la xidhiidha uu ku yidhi: “Waxaa waajib igu ah in aan qiimeeyo haddii ay hadda tahay waqtigii aan tagi lahaa Barca. Anigu waxaan doonayaa in aan ciyaaro, lacagtu dhibaato ma aha isla markaana kama cabsanayo tartanka”.
De Ligt oo difaacyada ay Barcelona haysato ka hadlaya ayaa yidhi: “Iyagu waxay kooxda ku haystaan difaacyo fiican, laakiin tartanku ma aha wax aniga i cabsi galiya.
“dabcan wax fiican ayay ahaan lahayd in aan De Jong la sii wato ciyaarista iyo dabcan Lionel Messi, laakiin waxaa waajib igu ah in aan go’aansado waxa aniga ii fiican”.
“Anigu ma garanayo waqtiga la xalin doono, laakiin waxaan doonayaa in aan waqtigayga qaato” ayuu Matthijs de Ligt hadalkiisa sii raaciyay.
Balse kabtanka Ajax ee Matthijs de Ligt oo soo bandhigaya waxa isga ugu muhiimsan ee uu kooxaha ku tartamaya ka eegi doono ayaa yidhi: “Qodobka ugu muhiimsan ee aan kooxdayda xigta go’aamin doona miyaa? Aniga ahaan waxa ugu muhiimsani waa in aan ogaado kooxda aan tagayo, oo aan ku yeelan doono door muhiim ah isla amrkaana aan ciyaari doono kulamada ugu badan”.
Matthijs de Ligt ayaa la waydiiyay: “Waa maxay qiimaytaada xili ciyaareedkaagu?
wuxuuna ku jawaabay: “Waxaan filayaa in uu ahaa xili ciyaareed cajiib ah ee aniga iyo kooxahaygaba (Ajax iyo Holland). aniga ahaan sharaf wayn ayay ii tahay”.
De Ligt oo go’aankiisa uu qaadan doono ka hadlaya ayaa yidhi: “Fasaxa ayaan u baxayaa waanan go’aansan doonaa, maadamaa oo aanu wali qalbigaygu garanayn halka aan tagayo. waqtigayga ayaan qaadan doonaa oo aan go’aansan doonaa”.
Kooxaha Barcelona, PSG, Juventus, Liverpool iyo Man United ayaan ilaa hadda ku kala bixin tartanka Matthijs de Ligt maadaama oo aanu 19 sano jirkani wali gaadhin go’aan kama danbays ah wuxuuna wali doonayaa in uu u furnaado dhamaan doorashooyinka uu heli kari si uu u qaato dookha ugu fiican.